Maxkamad aabbe ku amartay inuu taageero gabadhiisa oo ay hooyadeed kala tageen | Star FM
Home Wararka Kenya Maxkamad aabbe ku amartay inuu taageero gabadhiisa oo ay hooyadeed kala tageen
Maxkamad aabbe ku amartay inuu taageero gabadhiisa oo ay hooyadeed kala tageen
Mid ka mid ah qaadiyaasha dalka oo lagu magacaabo Cabdulxaliim Athmaan ayaa soo saaray go’aan ah in aabaha laga doonayo in gabadhiisa uu taageero ilaa iyo inta laga guursanaya xita hadii ay hooyadeed kala tageen.
Go’aankan ayuu kaga dhawaaqay ismaamulka Isiolo ka dib markii hooyo iyo gabadheeda ay dacwad gudbiyeen.
Waxay cabasho ka muujiyeen in odayga oo uu calafku kala geeyay aynan wax daryeel ah ku haysan sidaas awgeedna ay maxkamadda ka codsanayaan in ay u soo dhiso xaq ay rumeysan yihiin inuu ka maqan yahay.
Gabadha ayaa maxkamadda u sheegtay in ay u baahan tahay in aabaheed uu ka bixiyo qarashaadka waxbarashada ee machad ay dhigato.
Lamaanaha oo wada noolaa muddo 27 sano ah ayaa kala tagay bishii Novembar ee sanadkii hore.
Odayga ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeynta uga timid xaaskiisi hore wuxuuna sheegay in aynan wax qadarin ah u hayn.
Qaadiga ayaa ninkan ku amray inuu bixiyo qarashaadka tacliinta ee gabadhiisa sidoo kalena hooyadeed uu bil kasta siiyo 10,000 oo shilin.
Tani ayaa imaanaysa iyadoo qaar ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ay cabasho ka muujiyaan in carruurta lagu dayaco marka uu yimaado qoys burbur.
Previous articleRaila Odinga oo ka soo horjeestay hindise ka dhan ah siyaasadda Ruto
Next articleDugsiga sare ee gabdhaha ee Moi oo la xiray